‘कोभिड १९ डर लाग्दो रोग नै होइन’ – लक्ष्मी पाठक – Narayani Dainik
‘कोभिड १९ डर लाग्दो रोग नै होइन’ – लक्ष्मी पाठक
लक्ष्मी पाठक , भरतपुर -११ , रक्त संचार केन्द्र , भरतपुर
रक्त संचार केन्द्रमा काम गर्दै गर्दा म पनि कोरोन संक्रमित भएछु। कोभिड १९ पोजेटिभ देखिएको कारण बिगत १५ दिन आइसोलेशन बसेर फेरी पी सी आर टेस्ट गर्दा कोभिड १९ नेगेटिभ आएको छ। आज म एकदम धेरै खुसि भएको छु।
जति पनि कोभिड संक्रमित भएर बस्नु भएको छ उहाँहरुलाई मेरो सुझाब, बस्ताबमा यो कोभिड १९ त्यस्तो केहि डर लाग्दो रोग नै होइन । यो संग डराउनु पर्दैन , सुरक्षित बसे पुग्छ। रोगसंग लड्ने प्रति रोगात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु नै यो रोग संग लड्ने अचुक सुत्र हो।
मेरो व्यक्तिगत भोगाईमा मेरो सकारात्मक सोचले नै यो रोगसंग लड्न सकिन्छ। जति तपाईहरुले आफ्नो आत्माबल बढाउनु भयो भने यो कोरोना केहि पनि होइन। हजुरहरुले जति आफ्नो आत्माबल बढाएर बस्नुहुन्छ त्यति नै यो रोगलाई जित्न सक्नु हुन्छ।
कोभिड १९ संक्रमित भएर बस्नु भएकोहरुलाई जुन समाजमा हेर्ने नजर नै नराम्रो पाएको छु।यो कोभिड कसैलाई रहर ले लागेको हुदैनन , म पनि रक्त संचार केन्द्रमा सबैको सेवा गर्दै गर्दा सरेको हो। के रोग लाग्छ भनेर अरुको सेवा नगर्नु त ? कृपया जो कोहि संक्रमितलाई पनि नराम्रो द्रिस्तिकोणले नहेरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
आज हामी संक्रमित भयौं भोलि हजुर पनि हुन सक्नु हुन्छ। के हजुरलाई अरुले नराम्रो द्रिस्तिकोणले हेरेको मन पर्छ? हजुरले गर्दा जति पनि संक्रमित भएर बस्नु भएको छ उहाँहरुको आत्माबल कमजोर हुन्छ। जसले गर्दा कोरोना भईरसले उहाँहरुलाई कमजोर बनाउन सक्छ । कृपया सबैले संक्रमितलाई सकारात्मक दृस्टीकोणले हेरिदिन अनुरोध गर्दछु ।
बागेश्वोरी आइसोलेशनलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उहाँहरुले गर्नु भएको ब्यबहार तथा रेखदेखले नै हामी कोरोना मुक्त हुन सफल भएको छौँ। उहाँहरुले बिहान बिहान गराउने ब्यायाम, खान पिनको समय ब्यबस्थापन तथा सकाराक्मक सोच जगाउने क्रियाकलापको म मुक्तखण्ठले प्रशंसा गर्दछु।
खोजे पाईन्छको ‘सम्पूर्ण सामान्य ज्ञान’ प्लेस्टोरमा
चितवनमा युवा उद्धमी सम्मेलन सुरु,भोलि पूर्व अर्थ मन्त्रि सुरेन्द्र पाण्डेले सम्बोधन गर्ने